FHI: 201 soomaali ah ayaa laga helay corona-virus. - NorSom News
FHI: 201 soomaali ah ayaa laga helay corona-virus.
Laanta caafimaadka dadweynaha Norway( Folkehelseinstituttet) ayaa maanta soo saartay tirokoobkii maalinlaha ahaa ee ugu danbeeyay ee dadka uu ku dhacay xanuunka Corona-virus ama Covid-19.
FHI ayaa sheegtay in tirada dadka Norway cudurka qaaday ee ilaa hada la baaray, lana xaqiijiyay ay yihiin 4655 qof.
829 qof oo dadka xanuunka ilaa hada laga helay kamid ah, ayay FHI sheegtay inay ku dhasheen meel Norway ka baxsan. Soomaalida ayaana ah ilaa hada guruubka ugu badan ee ajaaniibta ah ee xanuunkan laga helay.
sida ku xusan tirakoobka FHI, 201 qof oo Soomaaliya ku dhashay ayaa laga helay xanuunka COVID-19, taas oo ka dhigan in 24% ajaaniibta xanuunkan laga helay ay soomaali yihiin.
Waxaa kusoo xiga dadka ku dhashay dalalka Sweden(45), Pakistan (41), Ciraaq (37), Iiraan (36), Filippinene (31) iyo Denmark (30).
Ilaa hada waxaa xanuunkan Norway u dhintay dad gaaraya 32 qof, kuwaas oo dhamaantood ay da´doodu u dhaxeyso 62 ilaa 92 sano.
Si aad ula socoto wararka NorSom News oo maqal iyo muuqaal ah, halkan riix(Barteena Youtube), kadibna Subcribe(Abonner).
Xigasho/kilde; Smittede i Norge i forhold til fødeland
Previous articleWASIIR isku dilay cudurka CORONAVIRUS dartiis
Next article13-jir Soomaali ah oo noqday qofkii ugu da’da yaraa ee UK ugu dhintay Covid-19.